Kala Saaray LCD Factory Taxanaha - Shiinaha Fidiyey LCD Soosaarayaasha Taxanaha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaal
LYNDIAN 37.1 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 37.1 inch oo fidsan LCD Display Series Taxane Tareen Ganacsi LCD Display Wide Extra Wide Display ， Nooca Baarka Noocan ah, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha lagu soo galo dadweynaha, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo raadinta qaabka, wuxuu bixiyaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 36 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 36 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsiga LCD Display Wide Extra Wide qaabka, wuxuu bixiyaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 28.6 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 28.6 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsiga LCD Display Wide Extra Wide Display Type Noocan Baarka Muuqaalka, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha lagu soo galo dadweynaha, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo raadinta qaabka, wuxuu bixiyaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 28 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 28 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsiga LCD Display Wide Extra Wide qaabka, wuxuu bixiyaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
LYNDIAN 24.5 inch oo fidsan LCD Display
LYNDIAN 24.5 inch oo fidsan LCD Display Taxanaha Tareenka Ganacsi LCD Muuqaal Dheeraad ah Dis Bandhigan Nooca Baarka, dib u habeynta muuqaalka lcd, muujinta ugu fiican ee goobaha lagu soo galo dadweynaha, cabirrada loo habeeyay, Qalabka fidsan ee Ultra, gawaarida iyo isdhexgalka gawaarida iyo ciyaaraha isdhexgalka gawaarida iyo raadinta qaabka, wuxuu bixiyaa qaab cusub oo cusub oo lagu soo jiito dareenka dadweynaha. Waxyaabaha ay ka kooban tahay ee leh shaashad ballaaran, fidsan, qaab qaabeed leh si labo kormeere ay u noqdaan mid maxaa yeelay waad wadi kartaa oo aad abaabuli kartaa xayeysiinta iyo rakaabka.
Bandhigga Smart Interactive Flat Panel Disorder, Isdhaxgalka Flat Panel Display, Dhammaan Hal Fagaare Is-dhexgal ah, Taabo Muuqaalka Iskuduwaha Isgaadhsiinta, 75 Is-dhexgalka Is-dhexgalka Is-dhexgalka, Is-dhex galka Whiteboard Interactive,